हेर्नुहोस् डान्सर आश्माका लोभलाग्दा सर्वाधिक सुन्दर १५ तस्वीर
मनोरञ्जन हेर्नुहोस् डान्सर आश्माका लोभलाग्दा सर्वाधिक सुन्दर १५ तस्वीर
नेपाल अनलाइन पत्रिका | काठमाडौं: द कार्टुन क्रुजकी आश्मा विश्वकर्मा पछिल्लो समय चर्चामा छिन् । नृत्य कौशलका कारण उनी म्युजिक भिडियोमा चम्केकी छिन् ।
नेपाली चर्चित डान्स ग्रुप ‘द कार्टुन क्रुज’की एक मात्रै लेडी सदस्य आश्मा विश्वकर्मा नाचेरै चर्चित बनिन् । पछिल्लो समय उनको फ्यान फलोइङ हेर्ने हो भने कुनै चर्चित नायिकाको भन्दा कम छैनन् ।
डान्सकै कारण विदेशमा समेत चर्चा कमाएकी आश्मालाई सामाजिक सञ्जालमा लाखौंले फलो गरेका छन् । युट्युबमा उनी सर्वाधिक खोजिने डान्सरमा पर्छिन् । अहिलेसम्म कुनै फिल्ममा पनि अभिनय नगरेकी आश्मा अभिनय क्षेत्रमा कदम राख्न चाहन्छिन् ।
कसैको पनि १ मिनेको मात्र डान्स गरेको भिडियो छोटो समयमा नै ५ करोड पटक भन्दा बढी हेरिन्छ ? नेपालका कुनैपनि अभिनेत्रीको त्यस्तो छैन । तर युट्युबमा बेजोड डान्सकै कारण लोकप्रिय बनेकी नेपाली डान्स ग्रुप ‘कार्टुन्ज क्रु’की महिला पनि हुन् ।
लामो समय देखि आफ्नो प्रस्तुति मार्फत दर्शकलाई मनोरञ्जन दिँदै आएकी आश्माको एउटा भिडियो डामेटोको सिटो मात्र ५९ सेकेण्डको छ । त्यही भिडियो ९ करोड नजिक भ्युअर पुगेको छ । आश्माका फ्यान फलोइङ गज्जबका छन् । पछिल्लो समय उनलाई वेब सिरिजमार्फत पनि दर्शकमाझ आइन् ।
द कार्टुन क्रुजमा आवद्ध आश्मा म्युजिक भिडियोका माध्यमबाट लाखौंमाझ पुगेकी आश्माको रुपको पनि चर्चा हुने गर्छ ।
‘द भ्वाइस अफ नेपाल’की होस्ट ओसिनका ‘हट’ अवतार, हेर्नुहोस् १३ तस्बिर
कविता - November 28, 2020 0
भिजे तथा मोडल ओसिन सिटौलाका हजारौं फ्यान छन् । उनको बोल्ने कलाले फ्यानको ध्यान तान्ने गर्छ । पछिल्लो समय भने ओसिन मिडियामा खासै देखिएकी छैनिन् ।
गज्जबसँग खुलेकी नायिका काजल अग्रवाल, हेराैँ १२ तस्विर
भारतमा साउथ फिल्म इन्डस्ट्रीका कमै एक्ट्रेसले आफुलाई दर्हिलो गरि उभ्याउन सफल भएका छन् । हेर्ने हो भने श्रीदेवी एक यस्ती एक्ट्रेस थिइन् जसले पहिलो पटक बलिउड फिल्म इन्डस्ट्रीमा महिला सुपर स्टार बन्न सफल भइन ।
जव शोमै अक्षयले ट्विंकललाई खोल्न लगाए पेन्टको बटम…
सन् १९९१ मा फिल्म ‘सौगंध’ बाट बलिउड क्यारियर शुरू गरेका अक्षय कुमारको संसारभर निकै चर्चा छ ।
दक्षिण भारतीय फिल्मका १० नायिकाः जो दक्षिण भारतका होइनन् आखिर कहाँका हुन् ?
बलिउड भन्दा बढी दक्षिण भारतीय फिल्म इन्डस्ट्रीका अभिनेत्रीहरुका सुन्दरतामा दर्शकहरुका ध्यान बढी जान्छ।